FBC - Finfinneetti ‘minibaasonni koodii 3’ 7, 800 mallattoo maxxanfatanii hojiitti seenaniiru
Finfinneetti ‘minibaasonni koodii 3’ 7, 800 mallattoo maxxanfatanii hojiitti seenaniiru
Finfinnee, Fulbaana 03, 2010 (FBC) Magaalaa Finfinnee keessatti hojiin ‘minibaasii koodii 3’ irratti mallattoo maxxansuu Hagayyya 17 jalqabe xumurame.
Abbaan-taayitaa Geejibaa Finfinnee mallattoo sararaa dameelee hundumaatti akka rabsamu godheen ‘miinibaasonni Koodii 3’ 7, 800 maxxanfatanii guutumaan guutuutti hojiitti seenaniiru.
Daayirektarri Bobbii Geejibaa fi Too’annaa Dhimmoota Naannoo Abbaa-taayitichaa Obbo Joonii Tarrafaa Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti akka himanitti rakkoo geejibaa magaalattii keessaa hiikuuf minibaasota kodii sadiif hojiin mallattoo maxxansuu xumuramee sarara isaaniirra akka hojjatan taasifameera.
Abbaan-taayitichaa ‘minibaasota koodii 3’ kuma 6 oliif mallattoo rabsuuf karoorfatee kan ture yoo ta’u, kan karoorfameen olitti rabsuun milkeessuusaa ibseera.
Akka qajeelfama raawwii naamusaatti guyyaa kaleessaatii jalqabee ‘minibaasota’ mallattoo hin-maxxanfanne fi sararaan ala hojjatan irratti tarkaanfii fudhachuun jalqabamuusaati kan himan. Taarik Addunyaatu gabaase.
Oduuwwan Biroo « Waldhabbii daangaa Oromiyaa fi Somaalee Ityoophiyaarratti uumame raayyaan ittisaa fi poolisiin federaalaa jidduu seenuun to’annaa jala oolchaniiru –mootummaa	Balaa lolaa Awaashin jiraattonni gara biraatti qubsiifamaniiru »